Aniga oo ah gabar (14 sanno jir ah) waxaa igu dhacay dhiigayga caadada todobaadkii lasoo dhaafay. Waxaan isticmaalay suufka dhiiga laga xirto waxaana si kedis ah ku bilaabay in uu dhiig xoogan iga yimaado. Waan cabsanayaa waxaa laga yaabaa in aan dhaawac gaarsiiyay xuubkayga bikrada. Maxaan sameeyaa hadda?
Adigu ma ahan in aad cabsatid.
Socodka dhiiga caadadaada iyo xoogiisa waa mid ay ka duwantahay sida caadiga ah mararka qaar.
Midaasi waxay noqon kartaa sababta uu dhiiga xoogan kaaga yimid.
Ma garanaysaa sida uu u egyahay xuubka bikrada?
Ii oggoloow in aan kuu sharxo:
Inbaddan oo dadka kamid ahi waxay aaminsanyihiin in maqaarkeeda ku koro dusha xubinka taranka.
Laakiin midaan waa khalad: xuubka bikradu waa uun duub.
Duubka wuxuu ku wareegsanyahay godka xubinka taranka.
Duubkan marwalba waa mid qaabkiisu duwanyahay:
Mararka qaar waa mid aad u yar oona ay adagtahay in aad aragtid.
Mararka qaarna waa mid weyn wuxuuna leeyahay kaliya god yar.
Arinta muhiimka ahi waxay tahay: in xuubka bikrada gabar kasta uu ka duwanyahay mida kale.
Kaliya ku dhowaadkii nus kamid ah dhammaan gabdhaha oo dhan ayaa dhiiga ka yimaada marka ugu horeysa ee ay galmo sameeyaan.
Kuma oggaan kartid adiga oo fiiriya in ay gabar galmo samaysay iyo in aysan samaynin.
Haddaba adiga uma baahnid in aad wel-weshid gebi ahaanba.
Haddii aad jeceshahay talo dheeri ah waxaad booqan kartaa dhakhtarka cudurada haweenka ama xafiiska ProFamilia (https://www.profamilia.de/)
Waxaad ka oggaan kartaa waxa meesha ka dhacaya gudaha su’aashan: Dhammaan gabdhaha saaxiibadayda ah ee iskuulka dhigta waxay hore ula kulmeen dhakhtarada cudurada haweenka. Aniga oo (14) jir ah sidoo kale miyaan u baahanahay in aan aado? Haddii aan aado maxaa dhacaya?
Anigu waxaan jeclahay qof laakiin ima oga qofkaasi in aan jeclahay. Waan jeclaan lahaa in aan qofkaasi la hadlo oona isbarano. Sideen qofkaasi hadalka ugu bilaabi karaa?
Ma u malaysaa qof in uu qurxoonyahay, wanaagsanyahay ama aad u fiicanyahay.
Haddaba adiga jacayl ayaa ku haya.
Hadda waxaad u baahantahay in aad qofkaasi baratid.
Kadibna markaasi unbaad oggaan kartaa haddii uu qofkaasi sax kuu yahay adiga iyo haddii uusan kuu ahayn.
Iyo haddii uu asaga ama ayada ku jeceshahay ama aan ku jeclayn.
Waa muhiim in aad ahaatid qof ixtiraam leh marka aad qofkale isbaraysid.
Si aynu kuugu fududeyno, halkan waxaa ku qoran naseexooyin ku saabsan shukaansiga ama haasaawaha:
Biloow xiriirka marka aad farxad dareemaysid.
Xiro labis wanaagsan laakiin aad raaxo ku dareemaysid si aad u dareentid ficnaansho.
Istaag meel u dhow qofka laakiin haku dhegin ee masaafo sii qofka kale.
Fiiri qofka oona ka eeg indhaha.
Dheh: “Waxaan jeclahay in aan ku barto. Ma suurtoobaysaa MIDAASI?”
Haddii ay haa tahay weydii qofka wax asaga ama ayada ku saabsan. Su’aalooyin ku saabsan muusikada ama hiwaayadaha ay jecelyihiin.
Muuji in aad danaysid qofka.
U sheeg waxa aad ku jeceshahay qofka.
Ammaanta koowaad waa in aysan noqonin mid ku saabsan jirka qofka.
Ku dheh, tusaale ahaan, in aad u aragtid in dookhiisa ama dookheeda muusikada ay wanaagsantahay ama qaabka uu u hadlo qofka.
Waad oggaan doontaa haddii uu qofka kuu jecelyahay sidaada oo kale.
Runtii waxay u baahantahay geesinimo aan caadi ahayn si qof loo barto.
Mararka qaar waxaad la hadlaysaa qof haddana waxaad arkaysaa in qofkaasi aanan wax xiiso ahba kuu qabbin adiga.
Dabcan midaan waa arin murugo kuu leh adiga.
Si kastaba ha ahaatee, haddana way wanaagsantahay in aad oggaatid.